Tian'i Ellen Sheidlin ny mihantsy amin'ny kanto sary mamaky tany | Famoronana an-tserasera
Ellen Sheidlin dia afaka nahazo mpanaraka 4,5 tapitrisa ao anatin'ny fotoana fohy dia misaotra ny sangan'asany kanto izay miavaka amin'ny maha hafahafa sy fihantsiana azy.
Mampiasa ny tenany izy ho maodelin'ireo fanehoana lehibe ireo izay mitady handrisika ny karazana fahatsapana rehetra amin'ireo izay mandinika azy. Nandritra ny 25 taona dia nahazo ny anarana fihantsiana izy miaraka amin'ny zavakanto mana-kevitra iray izay nahasarika ny sain'ny maro.
Fahano amin'ny Instagram an'ity Mpanakanto rosiana antsoina hoe Ellen Sheidlin izay feno fihantsiana sy sary izay tsy mampaninona azy ny mampiasa voaloboka vitsivitsy, manapaka laisoa amin'ny antsasaky ny ampongabendanitra vitsivitsy hahafantarana ireo faritra anatiny amin'ny vatana.
Na ahoana no ahafahany mampifangaro ny ampahany aminy vatana misy tranomboky feno boky ary ao no afangaroany ny mpijery rehefa manandrana mitady aiza ny fetra hamoronana an'io karazana "majia" io.
Miorina amin'ny fampiasana ny sary, kanto nomerika, lamaody ary makiazy hanambatra azy ireo ary hamorona ireo sary matanjaka afaka hitanao ao amin'ny anao Kaonty Instagram.
Tsy mijanona ao amin'ny sary mihantsy fihantsiana koa izany, saingy manana hafatra lalina dia lalina izy ireo mba tsy hialana amin'ny olana sasany mifandraika amin'ny olombelona. Ny asany, izay misarika ny tsy azo tanterahina ihany koa, dia mitarika amin'ny karazana hafatra mitsikera momba ny tamba-jotra sosialy na ny fomba mety hialan'ny fitondran-tenan'olombelona ankehitriny.
Manana izany ireo mpanaraka azy 4,5 tapitrisa ao amin'ny Instagram ho an'ity zavakanto tsy azo antoka ity izay azontsika atao, na dia amin'ny lafiny hafa aza ny duo Irina sy Silviu fa efa nandalo ireo andalana ireo isika taona vitsivitsy lasa izay. Izao fotsiny ianao dia mila miandry ny asany fihantsiana sy manaitaitra manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny kanto mihantsy sy mahavariana an'ity artista rosiana antsoina hoe Ellen Sheidlin ity
Ny volon-koditra ankapobeny dia miaraka amin'ny sary voalohany amin'ny sarimihetsika Studio Ghibli voalohany amin'ny 3D
Atombohy ny sary hosodoko: mianatra momba ny fomba samihafa hitondrana ny zavatra noforoninao